Markab Ganacsi oo toos ugu kala gooshi doona Turkiga iyo Soomaaliya - Tilmaan Media
Waxaa dakadda magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweeynayay markab badeeco toos oga keenay dalka Turkiga oo dalka soo gaaray. Markabkaan oo laga leeyahay dalka Jabuuti, ayaa badeecada uu kakeeno Turkiga soo gaarsiin doona Jabuuti iyo Soomaaliya isagoo aan dalalkale ku leexan.
Markabka oo lagu magacaabo African Sun ayaa waxaa iskaleh shirkadda “Djibouti Shipping Company” ayaa wuxuu badeecada ku keenayaa wakhti aad uga yar kii awal hore lagu keeni jiray.
Masuuliyiin kahadlay xafladda soo dhawaynta markabka ayaa sheegay in ujeedada loo sameeyay markabkaan ay tahay in lafududeeyo ganacsiga u dhaxeeya dalalka Turkiga, Jabuuti iyo Soomaaliya.
Markabka oo 2-dii bishaan kasoo baxay magaalada Istanbul, wuxuu kusoo xirtay dakadda magaalada Muqdisho, isagoo soo maray Jabuuti, wuxuuna usii gudbi doonaa sida la sheegay magaalooyinka Kismaanyo iyo Bossaaso kahor intuusan ku laaban Turkiga.
Maraakiibta Turkiga kaqaada badeecdada ee usocota Soomaaliya ayaa sii mari jiray dekado kuyaal dalal kale, sida Imaaraatka, Sucuudiga iyo kuwa kasii fogfog. Socdaalkaan dheer ayaa keeni jiray in badeecadu Soomaaliya ku gaarto mararka qaar 40 maalmood.